Ikotishi elikhethekile e-Hemavan - Ski in / Ski out - I-Airbnb
Ikotishi elikhethekile e-Hemavan - Ski in / Ski out
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Kristoffer
Indawo yokuhlala ephelele yamaholide enokubukwa okuhle kwe-Jofjället ne-Mortsfjället, etholakala eduze kwegquma elisha kanye ne-lift (Fällforsliften 50 metres). Igquma liseduze nawo wonke amakheshi nemithambeka ye-Hemavan. Lapha unokushushuluza kwangempela / ukushushuluza kanye nemizila ye-snowmobile ingakolunye uhlangothi lomgwaqo. Uma ufuna ukushushuluza eqhweni unqamula izwe, kungamamitha angu-200-300 ukushushuluza emizileni nasezindleleni zokukhanya kukagesi. Uma ufuna ukuqwala izintaba, iQueen's Trail, eholela eKungsleden edume umhlaba wonke, iqhele ngamamitha angama-500 ukusuka endlini.
Yindlu esanda kwakhiwa ehlukaniswe kancane etholakala eduze nendawo yokuphakamisa ekugcineni kobude. Indlu ingamamitha-skwele angama-65 futhi inendawo yokubeka eyi-4 square metres elungele ukugcina izinto zokushibilika eqhweni nezihamba eqhweni. Kukhona imibhede engu-6 + 2 emakamelweni okulala ama-3; igumbi elilodwa lokulala elinombhede ophindwe kabili kanye namakamelo okulala amabili anemibhede ye-bunk (okukhona umbhede ophansi we-120 cm kubantu abangu-1-2) ikhabethe lokugcina isitoreji ekamelweni ngalinye. Igumbi lokuhlala elinendawo yokudlela kanye nekhishi elihlome ngokuphelele. Isauna, isitofu esibasayo izinkuni, i-smart TV ne-Wi-Fi. Ithala elikhulu elibheke eningizimu elinamahora amaningi okukhanya kwelanga. Ukubhema nezilwane mahhala.
Ngokuqashwa kweviki elifushane Thu-Sun, kanye neviki eligcwele Thu-Thu kanye neLanga-Langa.
Xhumana nathi ukuze uthole amanani aqondile.
Yonke into ingaphakathi kwebanga elingamakhilomitha angu-2 ukusuka endaweni yokuhlala: Isikhumulo sezindiza, izindawo zokudlela, amakhefi, isonto, izitolo, indawo yokugibela eqhweni, imimango, imizila yemoto eqhweni, imizila yezintaba, imizila yokushushuluza enqamula izwe, imizila kagesi kanye nesitolo esikhulu se-ICA.